सस्तो व्याजका लागि कुन बैंकको ब्याजदर कति ? - Arthapage
सस्तो व्याजका लागि कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
प्रकाशित मितिः १८ पुष २०७५, बुधबार १५:५१ January 2, 2019
बैंकिङ खबर/काठमाण्डौं : के तपाई स्नातक तह उत्र्तिण भई बेरोजगार बस्नुभएको छ ? यदी त्यसो हो भने तपाईले सहुलियत व्याजदरमा ऋण लिएर आफैले व्यवसाय थाल्न सक्नुहुन्छ।
प्रकाशित मितिः १८ पुष २०७५, बुधबार १५:५१ |
Prevनयाँ वर्षमा सुरज थापाले नचाए
Nextगोरखा पोलिटेक्निक कलेजले कृषि स्नातकमा भर्ना खोल्यो